बीबीसीको प्रभाबशाली महिलाको सुचिमा परेकी सपनालाई ध. म्की दिने विनयजंगलाई निकै क. डा स.जा य हुने भयो – Gazabkonews
काठमाडौं- सपना रोका मगरलाई ध. म्की दिएको आरो पमा प.क्रा .उ परेका विनयजंग बस्नेतविरुद्ध साइ बर. अ परा धको मु.द्दा चलाइएको छ । विद्युतीय माध्यमको प्रयोगबाट सपनाको गो प्य त.स्वी.र रा.खेको पाइएपछि बस्नेतवि.रुद्ध वि.द्युतीय का.रोबार ऐनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । विनयजंगको मोबाइलमा सपनाको केही गो. प्य त.स्वीरहरु भेटिएको काठमाडौं प्र.हरी परिसर, टेकुका एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए ।तस्वीर कसरी आयो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ ।
‘बिहीबार सा इ बर अ.प राध सम्बन्धी कसुरमा कारबाहीका लागि ५ दिन म्याद थप गरिएको छ ।’ जिल्ला अदालत, काठमाडौंले कार्कीविरुद्ध अनुसन्धानका लागि पाँच दिन हि रा सतमा राख्न अनुमति दिएको हो । बीबीसीले सार्वजनिक गरेको सन् २०२० को १०० प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परेकी सपना रोका मगरले बस्नेतविरुद्ध काठमाडौं प्रहरी परिसरमा जाहेरी दिएकी थिइन् । सपनाको नाम बीबीसीको प्रभाबशाली महिलाको सुचिमा आएपछि सपना र विनयजंगको स म्बन्ध वि ग्रिएको थियो । एक अन्र्तवार्तामा विनयले सपनाको अ श्लि ल भिडियो देखाइदिने ध .म्की दिएपछि सपनाले उ जु .री दिएकी थिइन् ।
कानूनले अन्तर्जातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्छ, कथितरुपमा कसैलाई तल्लो जात भनेर होच्याउने, दुव्र्यवहार गर्ने जस्ता कार्यलाई बर्जित समेत गरेको छ । तर, ग्रामिण क्षेत्रमा अझै पनि तल्लो जाती र माथिल्लो जाती भन्ने÷मान्नेहरु भेटिज्छन् र उनीहरुले अन्तर्जातीय विवाहलाई स्वीकार्दैनन् र बर्जित गरिराख्नुपर्छ भन्ने मत राख्छन् । अन्तर्जातीय विवाह गरेका राजेश नेपाली र अन्जना कुँवरसँग हामीले उनीहरुले कसरी यो कदम चाले ? कथित रुपमा तल्लो उपल्लो जात भन्ने समाजमा अन्तर्जातीय विवाह कसरी सम्भव भयो ? उनीहरुबीच प्रेम सम्बन्ध कसरी स्थापित भयो ? उनीहरुले कसरी विवाह गरे ? लगायतका बारेमा कुराकानी गरेका छौं । कुराकानी रोचक छ, पूरा हेर्नुहोला । यही सामाजिक उल्झनका बीच पनि आँटेर अन्तर्जातीय विवाह गर्ने जोडी भेटेपछि हामीले उनीहरुको अनुभव सुनेका छौं ।
अन्तर्जातीय विवाह गरेका राजेश नेपाली र अन्जना कुँवरसँग हामीले उनीहरुले कसरी यो कदम चाले ? कथित रुपमा तल्लो उपल्लो जात भन्ने समाजमा अन्तर्जातीय विवाह कसरी सम्भव भयो ? उनीहरुबीच प्रेम सम्बन्ध कसरी स्थापित भयो ? उनीहरुले कसरी विवाह गरे ? लगायतका बारेमा कुराकानी गरेका छौं । कुराकानी रोचक छ, पूरा हेर्नुहोला ।